यो सबै कि उत्पादन को, त्यसैले सुन्दर आधुनिक पसलहरूमा, सुपरमार्केट र उपयोगी को समतल मा प्रबन्ध कुनै गोप्य छ। साथै, यो कुनै गोप्य खाना सन्तुलित हुनुपर्छ भनेर, अनुमोदन बोक्न छ उनको शरीर सामाग्री आवश्यक जोडती। यो हामी बाल्यकाल देखि दोहोरिन के छ।
र अझै हामी हरेक दिन खान सक्षम छन् भने? निरंतर र methodically खाना, एक वैविध्यपूर्ण आहार प्रयोग संतुलन? को पाठ्यक्रम छैन। हामी धेरै को लागि, "मेनु", "सही हरेक दिन खाने" "" आहार - कार्य गर्न उत्प्रेरित छैन भनेर शब्दहरू। को दोषी र जीवनको ताल, र (सट्टा स्वतन्त्र को र राम्ररी ह्यान्डल उत्पादनहरु हामी अर्ध-समाप्त उत्पादन, कुनै पनि लाभ ग्यारेन्टी गर्न सक्नुहुन्छ जो, न त पनि स्वाद किन्न) समय खाना पकाउन खर्च गर्न, र खाना यो रकम ज्ञान (अर्थात्। ई खाना गर्नुपर्छ त्यो एक अनिच्छा सन्तुलित हुन, हामी सम्झना, र यो अर्थ के - धेरै केहि मान्छे), छैन खाना विविधता क्षमता। तर तपाईं उदाहरणका लागि, मासु परिवर्तन गर्न, परिवर्तन गर्न दोस्रो प्लेट garnish, यो नियम बनाउन सक्छ ...
र ठीक छ, हामी, वयस्क, तर छोराछोरीलाई हामी पनि खुवाउन के थाहा छैन। ठीक छ, हामी अस्पताल र मा gastritikom सुत्न। र हाम्रो बच्चा बिरामी छ भने ?. त्यसैले जरुरी प्रश्न गठन "हरेक दिन को लागि सही भोजन," मेनु कम्तिमा एक हप्ताको लागि मेकअप र परिवार रूपमा स्वस्थ जीवन शैली जाने!
त्यसैले, के गर्छ प्रत्येक दिन को लागि सही भोजन छ? रोटी, अनाज, मासु, दुग्ध, तरकारी, फलफूल: मेनु उत्पादनहरु को निम्न प्रकार (हो, उत्पादनहरु प्रकार मा विभाजित छन्) समावेश गर्नुपर्छ। आहार को सबै भन्दा मासु, माछा, सिमी र डेयरी उत्पादन गर्नुपर्छ - 60%; दैनिक रकम पागल, वनस्पति तेल को 20%; अर्को 20% - तरकारी, फल। यी प्रतिशतको (प्रोटीन, बोसो र कार्बोहाइड्रेट को प्रसिद्ध संयोजन) मा आफ्नो शारीरिक गतिविधि र स्वास्थ्य आधारमा शारीरिक र मानसिक दुवै फरक हुनेछ।
अन्न उत्पादन (पीठो उत्पादन, अनाज देखि व्यञ्जन, अनाज) मासु र दुग्ध आहार को 60%, र फल र तरकारी को 20% प्रतिस्थापन गर्न सक्षम छन्। सबै किन हो पृथ्वीको जनसंख्या भन्दा खाना को 60% अनाज छ खपत। तर यो उपयुक्त सधैं छैन। उदाहरणका लागि, शरीर छैन फल बिना लामो जीवन बिताउन सक्छन् beriberi उत्पादनहरु को एक आहार महत्त्वपूर्ण प्रकार यो कमी गर्न प्रतिक्रिया। र मासु बिना (विशेष गरी बोसो - पोर्क) गर्छ मुड बिगार्छ (कमजोरी हुन्छ के छैन खाली छ, र सजिलो भोक को स्थिर भावना)।
उत्पादनहरु केही प्रकार एक भोजन छैन संयुक्त गर्न सकिन्छ। हामी के संयुक्त सकिँदैन (जस्तै, दुग्ध उत्पादन र फलियां, हामी भएका छन् छैन, साथै ककडी पेय दूध) मूल्यांकन गर्न सक्षम छन्। र आफ्नो मनपर्ने व्यञ्जन अझै केही, हामी खाना पकाउनु, आफ्नो सामाग्री को अमिल्दो अनजान जारी। उदाहरणका लागि, पकौडी (आटा र मासु अलग खाएको हुनु पर्छ), मासु र आलु। सामान्य मा, मासु राम्रो मात्र तरकारी संग, त्यसैले एक छनौट Blends मासु गर्न अतिरिक्त खाना , दिन प्राथमिकता, बरु यो नियम बनाउन तरकारी को एक पक्ष पकवान पकाउन।
उचित पोषण - अब हामी हाम्रो लक्ष्य जटिल। एक हप्ताको लागि आहार तपाईं त यो optimally उत्पादनहरु को सबै प्रकार जोडती कि बनाउन आवश्यक छ। र आटा र अन्न पर्याप्त थियो, र एकै समयमा, मासु र फल शरीर वंचित छैन।
उचित पोषण: साप्ताहिक आहार अप चित्रकला को नियम
त्यहाँ साप्ताहिक आहार को गठन केही नियमहरू छन्।
सबै को पहिलो, माथि अर्द्ध-समाप्त र "निर्मित सामान" सकेसम्म दिनुहोस्। यी सस्तो सामान (खाना राम्रो तिनीहरूले भनिन्छ गर्न सकिँदैन) को रूपमा तत्काल चाउचाउ सबैभन्दा हानिकारक। परीक्षण गर्न धेरै टिभि, मामला nutritionists विशेषज्ञहरु आकर्षित गर्न, लामो पहिले भन्दा यो सेटमा हानिकारक नै अहानिकारक छ चाउचाउ ", पूरक को सूप" को हुन् भनेर साबित भयो।
भाँडा दोहोरिन प्रयास गर्न: म अनाज, मासु (पोर्क, मासु, चिकन, घोडा मासु, बाछाको मासु, पाठो) परिवर्तन गर्न, दुग्ध परिवर्तन उत्पादनहरु (दही, kefir, किण्वित सुखा दूध, दूध जनाए), सलाद, तरकारी को एक किसिम र पनि फल एक मिठाई रूपमा, विभिन्न पेस्ट्री। माछा र समुद्री उत्पादनहरु (बन्दागोभी, झिंगा, केकडा मासु) समावेश गर्न पक्का हुनुहोस्। र यति मा। डी
अन्तिम टिप, हरेक दिन को लागि उचित पोषण बारेमा भूल छैन अनुमति: मेनु, तपाईं एक प्रमुख स्थानमा रचनाहरू गर्नुपर्छ गरे, अन्यथा यो भूल गर्न बाध्य छ गुमाए। सबैभन्दा तपाईंको फ्रिज मा ठाँउ हो।
खाद्य मा भिटामिन
हाइड्रोलिक उपकरण: तस्बिर, सुरक्षा उपकरण को इतिहास जब हाइड्रोलिक उपकरण काम
तरकारी र खुशबूदार मसलाहरु संग एक पैन मा कुखुराको पखेटा
दबाइ "Neyrofulol": समीक्षा, प्रयोग, analogs, संरचना लागि निर्देशन
सानो आकारको भान्सा कसरी परिवर्तन गर्न
सामन माछा सूप